Xawaareynta Goobtaada ee CSS Sprites | Martech Zone
Waxaan wax ka qorayaa xawaaraha bogga xoogaa xoogaa ah oo ku yaal boggan waana qayb muhiim ah oo ka mid ah falanqaynta iyo hagaajinta aan ku sameyno boggeena macaamiisheena. Marka laga soo tago u guurista server-yada xoogga badan iyo adeegsiga qalabka sida Shabakadaha Bixinta Macluumaadka, waxaa jira dhowr farsamooyin barnaamijyo kale ah oo isku-duwaha webka uu isticmaali karo.
Halbeegga loo yaqaan 'Cascading Style Sheet' wuxuu hadda ka weyn yahay 15 sano. CSS waxay ahayd horumar muhiim ah oo ku saabsan horumarka webka maxaa yeelay waxay ka soocday waxyaabaha ka yimid naqshadeynta. Fiiri balooggan iyo wixii kale iyo inta badan farqiga u qaabeynta ayaa si fudud ugu jira xaashida ku lifaaqan. Noocyada qaabdhismeedka ayaa sidoo kale muhiim ah maxaa yeelay waxaa lagu keydiyaa gudaha meel lagu keydiyo biraawsarkaaga dhexdiisa. Natiijo ahaan, maadaama dadku sii wadaan booqashada bartaada, ma soo degsanayaan xaashida qaab mar kasta… kaliya bogga bogga.
Tani, markeeda, waxay gaabineysaa bartaada. A goobta gaabis ah waxay ku yeelan kartaa saameyn baaxad leh hawlgelinta iyo beddelaadyada in dhagaystayaashaadu sameeyaan. Istaraatiijiyad ay adeegsadayaasha websaydhada waaweyn adeegsadaan ayaa sawirada oo dhan ku wada ridaya hal feyl… oo la yiraahdo a higgaadinta. Halkii aad codsi u samayn lahayd mid kasta oo ka mid ah sawirrada faylkaaga, hadda waxaa loo baahan yahay oo keliya in la helo hal codsi oo loogu talagalay hal sawir oo keliya!
Waxaad wax ka akhrisan kartaa sida CSS Sprites uga shaqeeyaan CSS-Tricks or Burburinta Magazine ee CSS Sprite boostada Ujeeddadaydu maaha inaan ku tuso sida loo isticmaalo, kaliya inaan kugula taliyo inaad hubiso kooxdaada horumarinta inay ku daraan goobta. Tusaalaha CSS Tricks bixiyaa wuxuu muujinayaa 10 sawir oo ah 10 codsi kuna dar ilaa 20.5Kb. Markii lagu soo ururiyey hal sprite, waa 1 codsi waa 13kb! Codsiga safarka wareega iyo waqtiyada jawaabta ee sawirada 9 hada waa baxeen waxaana xaddiga xogta la dhimay in kabadan 30%. Ku dhufo tirada booqdayaasha bartaada oo runtii waad xiiri doontaa xoogaa ilo ah!
The Apple bar navigation waa tusaale weyn. Badhan kasta wuxuu leeyahay dhowr gobol… haddii aad bogga ku jirtid, bogga ka baxsan, ama badhanka ku kaftameyso. CSS waxay qeexaysaa iskuduwaha badhanka waxayna u soo bandhigaysaa gobolka xaalada saxda ah biraawsarka adeegsadayaasha. Dhamaan goboladaan waxay kuwada burbureen hal shaxan - laakiin waxaa lagu muujiyey gobolba gobol sida ku cad xaashida qaabka.
Haddii horumariyayaashu jecel yihiin qalabka, waxaa jira tan halkaas ka baxsan oo ka caawin kara iyaga, oo ay ku jiraan Qaab dhismeedka CSS, Codsi Dhimis loogu talagalay ASP.NET, CSS-Spriter ee Ruby, Qoraalka CSSSprite loogu talagalay Photoshop, SpritePad, SpriteRight, SpriteCow, ZeroSprites, Mashruuca Fondue's Generator Generator, Sprite Master Web, Iyo SpriteMe Buug-yare.
Sawirada Sprite Master Web:
Martech Zone uma adeegsanaayo asalka asalka inta dulucdiisu tahay, marka uma baahnin inaan farsamadan dejino waqtigan.
Tags: xaashida qaabka cascadingCSScss spritecss spritesxawaaraha boggahiggaadintago'yaasha qaabka
Sep 13, 2012 at 5: 06 AM
Sug… ururinta oo dhami ma aha “sawir” (ama “diyaarad”), iyo sawir-hoosaad kasta (ama koox-hoosaadyada sawirada marka laga hadlayo kuwa isbadal leh ama is-beddalaya) "sprite"?
Waxaa laga yaabaa in walxaha dib loo beddelay tan iyo markii ugu dambeysay ee aan wax ka qabtay waxaas oo kale laakiin waxaan ku dhaartay inaan ku dhaartay Sprite-ka inuu yahay cunsurkii ugu dambeeyay ee la soo bandhigayay, ee uusan ahayn miiska xogta weyn ee laga soo jiiday.
(“Miiska Sprite”… taasi ma ahayn miyaa?)
Sep 13, 2012 at 5: 09 PM
Waxaa laga yaabaa inaan ka hadlayno laba waxyaalood oo kala duwan, Mark. CSS, waxaad asal ahaan ku qeexi kartaa 'qaybta' feyl feyl ah si aad u muujiso isuduwaha ka faa'iideysiga. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad sawiradaada oo dhan ku dhejiso hal 'sprite' ka dibna kaliya tilmaam meesha aad rabto inaad ku muujiso CSS.